Ingabe ikhona indlela ukudlulisa umculo kusuka Android wami ukuba iPod Touch 4G? Ngifisa ukwazi ukuthi ukuthumela mp3 amafayela kusuka Android Samsung Galaxy kuya iPod.
iPod kuyinto umdlali esimangalisayo umculo. I-Apple uye wakhulula esizukulwaneni 5 iPod Touch. Uma une songs eziningi kwi smartphone yakho Android noma tablet futhi ufuna ukudlulisa ukuba the iPod, kanjani?
Okokuqala, awukwazi ngqo ukuthumela umculo ngaphandle softare ezifana iTunes. Okwesibili, for the platform ezahlukene, awukwazi udlulise amafayela kusuka idivayisi Android kudivayisi iOS kalula, noma. Kodwa, nge Wondershare MobileTrans, ungakwenza kulula, lokudlulisa wonke umculo wakho kusuka divayisi ye-Android iPod kuphela 3 izinyathelo.
Download lokhu Android ku-iPod ukudluliswa Ithuluzi on the computer. Kuyinto kuyavumelana izinkulungwane Amadivayisi Android wonke iPods.
Le ngxenye is a okusheshayo guide show inqubo sokudlulisela umculo kusuka kudivayisi Android ku-iPod. Lets’ hlola it out!
Step 1: Faka futhi ukugijima Android ku-iPod ithuluzi sokudlulisa
Kufanele ufake futhi ugijime MobileTrans kwikhompyutha yakho. Kuyinto ehambisanayo kuphela Windows OS. Ungabona ifasitela ngqangi njengalesi uma ugijima it.
Step 2: Xhuma idivayisi yakho iPod ne-Android ku-computer
Xhuma zombili zedivayisi Android ne iPod Touch kuya computer kokusebenzisa izintambo USB. Lolu hlelo luyoba ukubona le amadivaysi ngokuzenzekelayo. Emva kwalokho, uzobona idivayisi Android kubonisiwe kwesokunxele, kanye iPod uveza ngakwesokunene. Imininingwane izobe adluliselwe kudivayisi kwesokunxele kuya kwesokudla idivayisi. Futhi Uma udinga ukususa umculo in iPod wakho ukudala indawo leli sokudlulisa, sicela uphawu off “Sula idatha ngaphambi ikhophi ".
Inothi: Uneminyaka akwazi ukushintsha ukuma amadivaysi amabili ngokuchofoza “Flip”. Emva kwalokho, ungakwazi ukudlulisela umculo kusuka iPod kudivayisi Android.
Step 3: Copy umculo kusuka Android kuya iPod
Loluhlelo kungaba ukudlulisa umculo, othintana, imiqophi nezithombe, njll. Futhi thina nje ufuna ukukopisha umculo, enika "Music" futhi uchofoze "Qala Copy". Phambili sokudlulisa kuzothatha isikhashana. Ngemuva kuqeda, sicela uchofoze "KULUNGILE" ukuze comfirm. Umculo You isithasiselo iPod manje.
Chofoza ukuzama MobileTrans ukudlulisa umculo ephakathi Android ne iPod.
Posted on November 20, 2013 June 1, 2014 Umbhali WillIzigaba EhambayoAmathegi Ukudlulisa Music kusuka Android kuya iPod
Langaphambilini post Previous: Indlela ukudlulisa Data esuka iPhone kuya Samsung Galaxy S4
Next post Next: Idlalwa kanjani Blu-ray Movies on Xbox 360